IPeru kunye neChile bavala imida kubakhenkethi bamanye amazwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » IPeru kunye neChile bavala imida kubakhenkethi bamanye amazwe
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseChile zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • LGBTQ • iindaba • Iindaba zasePeru • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
imephu yasemzantsi Melika
I-Chile kunye ne-Peru bayawuvala umda wabo ukuza kuthi ga ngoku ngeli xesha inqwelomoya enkulu yaseLatin America iLATAM ithe iyanciphisa ukusebenza ngama-70 eepesenti njengoko lo mmandla wawuzama ukuthintela ubhubhane wecoronavirus osasazeka ngokukhawuleza.
I-Latin America ibhalise ngaphezulu kwamatyala e-800 kunye nokufa kwabantu abasixhenxe, ngokwenani le-AFP, emva kokuba iRiphabhlikhi yaseDominican yaba sisizwe samva nje sokuxela ukusweleka.
Isibhengezo sifike ngelixa iChile ityhila ngoMvulo inani lamatyala e-coronavirus aphindaphindwe kabini ukusukela ngeCawa ukuya kwi-155.
I-Peru nayo ilandele emva nje kokuba uMongameli Martin Vizcarra ebhengeza umgaqo weeveki ezimbini “namhlanje, ukususela ezinzulwini zobusuku.”
Inxalenye yemeko yonxunguphalo ebhengezwe kade ngeCawa kodwa njengeChile, imithwalo ayizukuchaphazeleka ngenxa yokuvalwa komda.
IArgentina, iBrazil, iUruguay kunye neParaguay ziqinisekisile ukuvalwa kwemida yabo, ngelixa urhulumente waseAsuncion enyanzelisa ixesha lokufika ebusuku.